नैना रेसमले उचाइ बढायो – सापकोटा
By vijayafm on	 March 5, 2020 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय
दुर्गा सापकोटा लोक पारखीहरुका लागि चलेको नाम हो । उहाँले विभिन्न लोक तथा दोहोरी गीत बजारमा ल्याउनुभएको छ । पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको नैना रेसम गीतले थप उचाइमा पु¥याएको छ । यो गीत युट्युबको ट्रेन्डिङमा समेत परेको थियो । स्टेजमा उहाँको प्रस्तुति अझै दमदार रहने गर्छ । यसैसन्दर्भमा प्रस्तुत छ, लोक गायिका दुर्गा सापकोटासँग अनीता रानाभाटले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय धेरै चलेको गीत नैना रेसमको सिर्जना कसरी भयो ?
जहिले पनि हामीले श्रोता र दर्शकको चाहनाअनुरुप नै गीत रेकर्ड गर्ने गर्छौं । यो गीत पनि हामीले निकै मेहनत गरेर गरेका थियौँ । शिव अखेली दाइको शब्द र सूर्य खड्काले गाउन साथ दिनुभएको छ । म उहाँहरु दुवैजनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु । यो मीठो गीत गाउन दिनुभएकामा उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिले सबै जनाले रुचाइदिनुभएको छ । माया गरिदिनुभएको छ । लामो समयसम्म ट्रेन्डिङमा पनि रÞयो खुसी छु। सबै श्रोता र दर्शकप्रति आभारी छु । नैना रेसमले मलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ । सबैलाई चिनायो भन्ने लाग्छ ।
युट्युबमा अपलोड गरेको कति दिनमा ट्रेन्डिङमा परेको हो?
हामीले अपलोड गरेको २४ घण्टा पुग्न नपाउँदै ट्रेन्डिङमा परेको हो। ट्रेन्डिङको ८ नम्बरसम्म पुग्यो र लामो समयसम्म यसले सो स्थान कब्जा गर्न सफल रÞयो । यो भनेको एकजना कलाकारका लागि सफलता हो । मोफसलमा बसेर गीत रेकर्ड गर्दैगर्दा यसले खुसी तुल्याउने भइहाल्यो । गीतका बारेमा आएका सुझाव तथा सल्लाह हेर्न खुल्दुली भइरहन्थ्यो ।
परदेशी गायक भनेर चिनिने सूर्य खड्कासँगको कसरी भेट भयो ?
हो, उहाँलाई धेरैले परदेशी गायक भनेर चिन्नुहुन्छ । उहाँसँग यो मेरो पहिलो गीत रेकर्ड हो तर यसअघि नै स्टेज सेयर गरेर गीत गाएका थियौँ । सूर्यजी नेपाल हुँदा ठाउँ ठाउँमा गीत गाइरहन्थ्यौँ । चितवनमा पनि स्टेजमा हामीले लाइभ दोहोरी गाएका छौँ।
कलाकार छनोट र खर्च कसरी गर्नुभयो ?
चलेका कलाकारहरुले यसमा अभिनय गर्नुभएको छ । सागर लम्साल बले र टिक टकका क्विन जुम्ल्याहा प्रिज्मा र प्रिन्सीलाईराख्दा खर्च अल्ली धेरै नै भएको छ । अहिलेसम्म मैले गरेको गीतको सबैभन्दा धेरै खर्च यहीगीतमा भएकोछ । ६ लाखभन्दा बढी खर्र्च भइसक्यो ।
नैना रेसमले तपाईंहरुको लगानी उठाउला त ?
कलाकारले लगानी र फलको आशा गरेर मात्र पनि हुन्न तर धेरै आशा बोकेको गीत हो ।खेती हो, भए फल खाने नत्र नभए चित्त बुझाउने हो । धेरै आशा छ मलाई अहिले राम्रो गएकोछ युट्युबमा पनि । सबैले धेरै माया गरिदिनुभएको छ । यसले भोलिका दिनका बाटाहरु पनि सहज बनाउनेछ ।
गायकले आफै अभिनय गर्ने प्रचलन छ, तपार्इंलाई त्यस्तो लागेन ?
यो सम्भव भएन । सूर्यजी जापान भएकाले त्यो सम्भव देखिएन । उहाँले परदेशबाटै आवाज दिनुभयो । फेरिगीतपनि गाह्रो छ । अभिनय गर्नु सामान्य कुरा होइन । नाच्न ढङ्ग हुनुप¥यो । त्यसमाथि चलेका कलाकारहरुको माग बढी हुन्छ । त्यही भएर यो गीतको मुख्य भूमिकामा हामी आफै खेल्न सकेनौँ । थोरै भूमिका मेरो पनि छ तर गायक–गायिकाको काम भनेको गीत गाउने मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।
गायन क्षेत्र कस्तो छ ?
रमाउन सक्नेका लागि रमाइलो नै छ । अहिलेसम्म १ दर्जनभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएको छु । धेरैजसो स्टेजमा नै रमाउने मान्छे हुँ । त्यसमाथि स्टेजका लागि नै बढी माग हुन्छ । लाइभ दोहोरी गाउने मान्छेलाई खोजी खोजी बोलाउँछन् । गायक गायिकालाई स्टेजबाट आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ । यो गायन पेशा एउटा नसा हो । कति स्टेजमा हामीले पैसा नलिइकन सहयोग पनि गरेका छौँ । आयोजक घाटामा छ भन्ने खालका जवाफ पनि आउँछन् । कहीँकतै तोकिएको मूल्यभन्दा बढीपैसा पनि दिने गर्नुहुन्छ । यो सबै गाउने कलामा पनि भरपर्छ ।
स्टेज कार्यक्रमका लागि महिलाहरुलाई कति सहज छ ?
एकदमै गाह्रो छ । मेकअपमा पनि खर्च हुन्छ । सबैको अघि उभिँदा राम्रो हुनैप¥यो । केटालाई जस्तो सजिलोचाँहि हुँदैन । सोचेजस्तो फेरि आम्दानी पनि हुँदैन । सानैदेखि गाउने बानी प¥यो, छोड्नै सकिएन । घर–परिवारको साथ र सहयोग हुन्थेन भने यो पेसामा गाह्रो हुन्थ्यो । परिवारको पूरै साथ र सपोर्ट छ । हरेक गीतमा हौसला दिने गर्नुहुन्छ । यसले अझै उर्जा मिलेको छ ।
संगीत के रहेछ?
संगीत एउटा लत रहेछ । जसमा डुबेपछि निस्कन धेरै गाह्रो हुँदोरहेछ ।धेरै दुःखले नै यहाँसम्म आएको छु । सबैको माया पाएको छु । पहिले गीत गाउन जाँदा बाहिरी मान्छेले कुरा काट्दा दुःख लाग्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । गीत चल्दा खुसी लाग्छ । परिवारको साथ र सपोर्ट पाउँदा अझ खुसी लाग्छ।
दर्शक,श्रोता र पाठक मेरा भगवान हुन् । विगतमा भैmँ आगामी दिनमा पनि यसरी नै माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु र यस अवसरका लागि विजय खबर पत्रिका परिवारलाई धन्यवाद छ ।